अधिकांश महिलाको सोच श्रीमानले धेरै पैसा कमाउन्, गरगहना जोडिदिउन, राम्रो साडी किनिदिउन् भन्ने हुन्छ । कसरी आफैँ आत्मनिर्भर हुने, आफैंले काम गरेर समाजमा कसरी उदाहरणीय बन्ने भन्ने सोंच भएका महिलाहरू औँलामा गन्न सकिन्छ । गाउँघरमा महिलाहरूले निर्वाहमुखी कृषि पेशा अँगाले पनि काठमाडौँंमा बसेर व्यवसायिक कृषि पेसा अँगाल्ने महिलाहरूको संख्या धेरै थोरै छ । अझ गाउँबाट शहर पसेका महिलाहरूले कृषि पेशा अँगालेको त्यत्ति पाइदैन । तर खोटाङबाट काठमाण्डौँ आएकी जयकला बस्नेत भने विगत एक वर्षदेखि कृषि पेशामा मज्जैले भिजेकी छिन् र खुशी पनि छन् ।
काठमाडौँको गोठाटारमा ३० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उनले अहिले व्यवसायिक तरकारी खेती गरेकी छिन् । होलसेल किराना पसल, फर्निचर उद्योग र बालुवा सप्लायर्सको काम गर्दै आएकी जयकलाले किन रोजिन त कृषि पेशा ? कृषि पेशाबाट महिलाहरू आत्मनिर्भर हुन सक्छन् ? कृषि पेशाका चुनौतीहरू के के छन् ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संगीता पनेरुले गरेको कृषि कुराकानी ।
तपाईले किन कृषि पेशा रोज्नुभयो ?
कृषि पेशा मेरो मन परेको पेशा हो । मलाई पहिला पनि लाग्थ्यो र अहिले पनि लाग्छ कृषि विना हामी बाँच्न सक्दैनौ । म त पहाडमा जन्मिएको मान्छे गाउँमा बस्दा पनि कृषि काम नै गरियो । केही समय काठमाडौँमा किरानाको होलसेल चलाइयो, बालुवा सप्लायर्स गरियो । तर म त्यसमा रमाउन सकिन । किनकी कृषि पेशा भनेको आफू र राष्ट्र पनि आत्मनिर्भर बन्ने पेशा हो भन्ने लाग्यो अनि त्यो काम छोडेर व्यवसायिक कृषि पेसा रोजे । तर फर्निचर उद्योगको काम भने चलि नै रहेको छ ।
तपाईलाई कृषि पेशामा लाग्नुपर्छ भनेर कसैले प्रेरणा दियो की आफ्नै मनले सोचेर गर्नुभयो ?
यसमा मलाई सबैभन्दा बढी प्रेरणा मेरा श्रीमान डम्बरबहादुर बस्नेतले दिनुभएको हो । उहाँ पहिला नेपाल आर्मी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले धेरै देशहरू भ्रमण पनि गर्नुभएको छ । विदेशको कृषि प्रणालीबाट आकर्षित भएर मलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरणा दिनुभयो ।
अहिले तपाईको कृषिफर्ममा केके छन् ?
सबैभन्दा धेरै त गोलभेडा नै हो । त्यसभित्र मौसम अनुसार अन्य तरकारीहरू छन् । जस्तै काउली, बन्दा, साग, सिमी, गाँजर, मुला, केराउ । अनि सँगसँगै मेरो फर्ममा १२ वटा गाइ, ३० वटा बाख्रा कुखरा आदि छन् ।
त्यत्ति ठूलो फर्मको व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी राख्नुभएको छ की आफैंले भ्याउनु हुन्छ सबै काम ?
गर्न त आफूले गर्ने हो । यदि कुनै काम आफूले मेहनतका साथ गरिएन भने त्योसफल हुन सक्दैन । मैले र मेरो श्रीमानले मात्र त्यत्ति ठूलो फर्म सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । दैनिक १५ जनाले मेरो फर्ममा रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूलाई काम अनुसार मासिक तलब दिने गर्छु । साथै कर्मचारीलाई डे«सको व्यवस्थाका साथै मैले एक वर्ष पूरा भएपछि संचय कोषको पनि व्यवस्था गरिदिएको छु ।
कृषि पेशामा समस्या पनि छन् नी है ?
धेरै समस्या छ । पहिलो कुरा किसानले समयमा बिउ र मलखाद पाउँदैनन् । बल्ल तल्ल पाउँछन् र उत्पादन गर्छन् अनि उपजले बजार मुल्य पाउँदैन । सरकारले बजारको व्यवस्था गर्न नसक्दा हामी जस्ता किसानहरूले धेरै दुःख बेहोर्नुपरेको छ । विचौलीयाहरूको बिगबिगी छ । सरकारले कृषि पेशालाई खाद्यान्नको प्रमुख आधार भन्छ तर त्यही खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानको मर्का बुझ्दैन । राज्य कृषिमा अनुदानको कुरा गर्छ तर त्यो अनुदान केही टाठाबाठाहरूले मात्र पाउँछन् सोझा किसानसम्म त्यो अनुदान पुग्न सक्दैन । बरु राज्यले कृषि फर्मलाई धितो मानेर शून्य प्रतिशत ब्याजमा पाँच वर्षको लागि ऋण दिने व्यवस्था ग¥यो भने अनुदान दिनै पर्दैन । त्यो गर्दा सबै किसानहरूमाथि न्याय होला ।
तपाईले अहिलेसम्म कृषि विकास बैंकबाट ऋण पाउनु भएको छ कि छैन त ?
मैले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि ऋण पाएको छैन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल भने जिल्ला जिल्लामा कृषि ऋण पठाएको छ भन्नुहुन्छ जिल्लामा गयो पैसा छैन भन्छ । खै के हो कुरा बुझ्न गाह्रो छ । मैले एक करोड भन्दा बढी लगानीमा कृषि फर्म सञ्चालन गरेको छु ।
भनेपछि महिलाहरू पनि कृषि पेशाबाट आत्मनिर्भर हुन सक्छन् होइन त ?
एकदमै । यसमा दुविधा नै छैन । महिलाहरूमा जाँगर हुने हो भने कौशीखेती गरेर पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ ।